दूधमा बेसार मिसाएर पिउदा फाईदै फाईदा ! - Sagarmatha Online News Portal
दूधमा बेसार मिसाएर पिउदा फाईदै फाईदा !
काठमाडौ । आयुर्वेदले बेसारलाई औषधीय गुण भएको वनस्पतिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । चिकित्सा विज्ञानले पनि यसलाई भिटामिन र खनिजको मुख्य स्रोतका रूपमा लिन्छ ।
दूधमा बेसार मिसाएर पिउदा यस्तो छ फाइदा :
अल्सरमा उपयोगी : दुध र बेसार यस्तो शक्तिशाली एन्टी सेप्टिक हुन्छ, जसले पेटको अल्सरलाई समेत ठीक गर्छ । यसले पाचनलाई राम्रो बनाउँछ । अल्सर, डाइरिया र अपच हुन दिदैन ।
महिनावरीमा हुने दुखाईबाट छुटकारा : बेसार भएको दुध पिउदा महिनावरीको क्रममा हुने दुखाई पनि कम गर्छ ।
बेसारमा प्राकृतिकरुपमै एन्टीइन्फ्लेमेटोरी तथा एन्टीअक्सिडेन्टको मात्रा प्रचुर रहनछ । यी तत्वले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास गर्दछ । बेसारमा हुने करक्यूमिन नामक तत्व शत्तिशाी एन्टीअक्सिडेन्ट हो जसले कोशिकाहरु नष्ट हुनबाट जोगाउँदछ र शरीरमा कोशिका निर्माण तीव्र बनाउँदछ । जानौं यी बाहेक अन्य यसका फाइदाहरुः
१) दिमाग तीक्ष्ण बनाउँछ स् हल्का मनतातो पानी र बेसार विहानको समयमा पिउने हो भने यसले हाम्रो दिमागको तीक्ष्णता विकास गर्दछ र अधिक क्रियाशील बनाउँछ ।
२) जलन कम गर्छ स् यदि शरीरमा सुनिने र जलन हुने समस्या छ भने बेसार पानी पिउनुस् । यसमा हुने कुर्कुमिन तत्वले सुनिने, जलन हुने तथा जार्नीको दुखाई हुने समस्याबाट मुक्त गर्दछ । यी समस्याका लागि बेसार पानी अचूक मानिन्छ ।
३) मृगौला क्रिया चुस्त बनाउँदछ स् बेसार पानीको प्रयोगले मृगौलाको क्रियाकलापलाई चुस्त राख्दछ । यी रोगीका लागि औषधीभन्दा कम छैन बेसार पानी । यसले मृगौलामा भएको खराब कोषहरु नष्ट गरी मृगौलाको कार्यसञ्चालन चुस्त बनाउँदछ र संक्रमण हुनबाट रोक्छ ।
४) हृदयको समस्यामा फाइदाजनक स् हृदय समस्याका विरामीले बेसार पानी पिउन जरुरी छ । यसले रगतलाई बाक्लो हुन बचाउँदछ । जसकारण हृदयघातकको जोखिमलाई न्यून गर्दछ ।
५) सुन्दरता बढाउँदछ स् बेसार पानीमा कागती र मह मिलाएर पिउने हो भने शरीरमा भएका विषाक्त पदार्थहरु शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ । यसरी पानी पिउँदा शरीरमा कोष ताजा भइराख्छ र उमेरको प्रभाव बढ्न दिँदैन । बेसारमा हुने स्वतन्त्र रेडिकल्सहरुले सुन्दरतालाई बढावा दिन्छ ।
६) पाचन राम्रो बनाउँछ स् बेसार पानीले पाचनप्रक्रिया सुधार गर्न मद्दत गर्दछ । यसमा हुने एन्टी एक्सीडेन्ट र एन्टी इन्फ्लेमेटरीतत्वले पाचन राम्रो बनाउँदछ र ग्याँस हुन दिंदैन ।
७) प्रतिरक्षा विकास गर्दछ स् मनतातो बेसार पानीले शरीरमा प्रतिरक्षा क्षमता विकास गरी रुघाखोकी जस्ता सामान्य रोगहरु तत्काल निको पार्दछ । यतिमात्र नभई यसले विभिन्न किसिमका क्यास्रका रोगको सम्भावनालाई न्यून गरी क्यान्सर हुनबाट बचाउँछ ।
८) मोटोपन घटाउँछ स् बसोरको सेवनले मोटोपनमा पनि राहत पाउन सकिन्छ । यसमा हुने करक्यूमिन तत्व शरीरमा घुलेर चिल्लोपदार्थ विकास गर्ने तत्वहरु बन्नबाट रोक्दछ ।
९) दुखाईमा राहत स् बेसार शरीरमा हुने दुखाई कम गर्न एकदमै उपयुक्त मानिन्छ । हड्डी टुटेमा, मर्किएमा तथा अन्य चोटपटकमा फाइदाजनक हुन्छ । यसका निम्ति दुध र बेसार मिलाएर पिउनु फाइदाजनक हुन्छ । यसले शरीरमा एलडीएल कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि कम गर्छ जुन हृदयसम्बन्धीका रोगसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
१०) बढ्दो उमेरको असर कम गर्छ स् बेसारको दैनिक प्रयोगले उमेरको असरलाई कम गर्दछ । दुधमा मिलाएर पिउनु छालाका लागि राम्रो मानिन्छ ।
राति सुत्नुभन्दा पहिला बेसारसहित दुध खानु :
सहि मात्रामा सेवन नगर्दा बेसारले शरीरलाई नकारात्मक असर पनि पर्ने हुन्छ । बेसारयुक्त दुध कतिपय रोगको लागि नराम्रो पनि हुन सक्छ । शारिर सुन्निएको घटाउन, इम्यूनिटी बढाउन, मुटु रोग र डायबिटीजसंग लड्नको लागि पनि सहयोग गर्छ ।
बेसारयुक्त दुधका फाइदाहरुः
बेसारले शारिरको प्रतिरक्षा बढाउने काम गर्छ जसले गर्दा रुघा, खोकी वा फ्लु जस्तो मौसम परिवर्तनको कारणले हुने बिरामीबाट बचाउन सहयोग गर्छ । रति सुत्नु भन्दा पहिले बेसर दुध पिउँदा शारिरको हर्मोनल सन्तुलनमा सुधार हुन्छ जसले गर्दा अनुहारको छालाको समस्या कम हुन्छ । शरीरको तौल घटाउन, छालाको समस्या हटाउन साथै मधुमेहको बिरामीको लागि पनि बेसारको चियाले फाइदा गर्छ ।
कसरी बनाउने बेसार युक्त दुध ?
बेसार जो कोहीको भान्सामा हुन्छ । तरकारी, दाल, मासुलगायत जुनसुकै परिकारमा बेसारको प्रयोग अनिवार्य गर्ने चलन छ । बेसारलाई मसलाको रुपमा प्रयोग गरिंदै आएको छ । फाइदा थाहा नहुँदा पनि यसको प्रयोग पुस्तौंदेखि हुँदै आएको छ ।
पूर्वीय मुलुकमा खानाको स्वाद बढाउन र परिकार आकर्षक देखाउन बेसारको प्रयोग हजारौं वर्षदेखि भइरहेको छ । अन्जान तरिकाले बेसारको प्रयोग भइरहे पनि यसले शरीरलाई अनेक फाइदा दिइरहेको छ । परिकारमा मिसाइएको बेसारले खाना पचाउन पनि मद्दत गर्छ । यसमा प्राकृतिक रुपमा औषधिय गुण हुन्छ ।
पछिल्लो समय विभिन्न अध्ययनले बेसारको फाइदाबारे निष्कर्ष निकालेपछि संसारभर यसको प्रयोग बढेको छ । पूर्वीय मुलुकहरूमा यसअघि खानामा मात्रै प्रयोग गरिने बेसार अहिले दूध, पानी, महलगायतसँग मिलाएर पनि सेवन गर्न थालिएको छ ।
बेसारले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै इन्फेक्सनबाट बचाउँछ । यसमा शरीरलाई आवश्यक क्यालोरी, भिटामिन ए, क्याल्सियम, फस्फोरस, आइरनलगायत तत्व पाइन्छ ।
बेसारलाई ‘नेचुलर पेन किलर’को रुपमा पनि चिनिन्छ किनकि यसले शरीरमा हुने दुखाइलाई निदान गर्छ । त्यसैकारण गाउँघरमा पहिल्यैदेखि काटेको, पोलेको चोटपटक लागेको ठाउँमा बेसारको प्रयोग गरिंदै आएको हो । मांसपेशीमा हुने पीडालाई बेसार सेवनले केही हदसम्म कम गर्छ । अनिद्राको समस्या हटाउन पनि बेसार उपयोगी मानिन्छ । बेसार मिसाइएको दूधमा ट्रायटोफन हुन्छ, जसले राम्ररी निद्रा लगाउँछ । वजन घटाउन पनि बेसारको प्रयोग निकै उपयोगी मानिन्छ ।
बेसारको नियमित प्रयोग छालाको लागि फाइदाजनक छ । यसले छाला चम्किलो बनाउन र बुढ्यौलीलाई धकेल्ने काम गर्छ । त्यसैले सौन्दर्य प्रशाधनका सामग्रीको बेसारको प्रयोग हुन्छ । बेसारले मानसिक चिन्ताको शिकार हुनबाट जोगाउनुको साथै स्मरण शक्ति पनि वृद्धि गर्छ । बेसार र दूधको मिश्रणमा क्याल्सियम पाइन्छ । जसले हड्डी बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । महिनावारीमा हुने पीडा कम गर्न पनि बेसारको प्रयोग उपयोगी हुन्छ ।
Published On: ६ असार २०७७, शनिबार